Uma ubulokhu udlala lo "Maynkraft", ngalesosikhathi you azi ukuthi lo mdlalo ngoba eziningi zokuguqulwa ewusizo ezaziwayo. Ezinye zazo ezincane futhi zikuvumela, isibonelo, ukuze zilawule le isilwane, okungakwazi kwenziwe langalikholwa inguqulo yasekuqaleni. Kodwa kukhona kakhulu ezinkulu ukulungiswa engeza ukuba umdlalo lonke uhlelo zokukhiqiza, basebenzise izikhungo, ukwandisa amathuba kusezingeni Amazing. Enye yalezi Mods kuyinto Vula Ezamakhompiyutha, ngawo uzokwazi ukuba angene esizayo. Lo mdlalo kuzokwenza kube ukwazi ukwakha ikhompyutha agcwele ezokwenza imisebenzi eziningi futhi ukuze uthumele amasignali olunembile ezingaphezu kuka izintambo ezivamile Redstone. Kodwa futhi lo msebenzi kungenzeka ukudala irobhothi agcwele - ikhompyutha ukuhamba, okuyinto uyakwazi kucutshungulwa hhayi kuphela imisebenzi ukudlulisa signal, kodwa futhi ukufeza imisebenzi ekhethekile. Ngakho-ke, wonke umuntu ufuna ukwazi indlela yokwenza irobhothi "Maynkraft" lokho ayekwenzela wonke umsebenzi ezingcolile futhi kanzima.
Lokhu ukuguqulwa unezela inani elikhulu lezinto ezingafaniko, ezazingekho kule nguqulo yokuqala. Futhi uma ufuna ukufunda ukwenza irobhothi "Maynkraft", bese udinga ukuqala ngijwayele lezi zinto. Iqiniso lokuthi robot uzokubheka lokho abakwenzayo nje omunye wabo - iresiphi of intelligence yokufakelwa, kukhona cishe akukho into, okuyinto kwaba ngaphambilini iyatholakala kuwe. Ngakho, ukuze uthole robot, uzodinga sihlanganise qapha, isiqophi ikhadi, disk drive, Ezezindlu ikhompyutha, inkumbulo , namabhethri ezimbili. Iqiniso lokuthi lokhu iresiphi usabiza "Maynkraft", futhi hhayi nanoma yimaphi amanye umdlalo, wena nje ukukhumbuza distributor trolley, nayo asisebenzisa ekudaleni irobhothi bakudala kakhulu. Nokho, lokhu akukhona konke uyakwazi lokhu ukuguqulwa. Okulandelayo uzofunda indlela yokwenza irobhothi "Maynkraft" okuthuthukile.
Uma ufuna ukufunda ukwenza irobhothi "Maynkraft" ithele ngokwengeziwe, esebenza kahle futhi multi-functional, udinga ukwakha amarobhothi ngalendoda. Iqiniso lokuthi indalo eziyisisekelo, ungakha ngokwakho - iresiphi ozifundile. Nokho, ngosizo ngalendoda ungafaka ekwakhiweni izinto zakho engcono ukuthi siyonikwa, kuye ngokuthi yini isiqondiso ufuna ukucela irobhothi yakho. Ufuna ukuba kube izinto misela? Setha lokhu ngalendoda, futhi uzobe izingxenye ezokwenza robot ehlelelwe more umsebenzi ahlinzekwa. Njengoba ubona, kubaluleke kakhulu ukwazi indlela yokwakha "Maynkraft" irobhothi, njengoba lokhu kuyokusiza ukuba ukudala umsizi jikelele.
Kukhona into ongasakudingi emdlalweni efana "Maynkraft" - Card. irobhothi Mechanical ngaphandle kwezinkinga uzothola indawo into oyifunayo ke yena - kodwa kanjani alimise? Ukuze wenze lokhu uzodinga ukufaka uhlelo lokusebenza irobhothi, ongayikuswela kakade bakwazi umcele isenzo kohlelo - ukukhiqizwa izinto, Ukuvikelwa zensimu, indawo yokutadishela, nokunye. Lena yindlela uzokwazi ukuphatha ke, kuhlela Okuqondiwe irobhothi. Uma ufuna ukwazi ukuzishintsha ngokuhamba kwesikhathi, uzodinga ukuyifaka ku wireless ikhadi inethiwekhi.
Njengazo zonke imishini, robot kudinga amandla ukuze afeze imisebenzi yayo. Ungakwazi ashona amabhethri yakhe ngesandla, kodwa lokhu udinga ukuthintana ngqo. Yenza ukuphila kwakho kube lula, ungakwazi ngokufaka kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi solar panel, okuyinto kuyoba njalo ngibanika amandla ukusebenza.
Speed ukushayela futhi isiphepho drift - emncintiswaneni ohamba phambili ku-PC
Elalinembobo Dynamic Ayikho Mans Sky: izici, umhlahlandlela kanye nezincomo
Yekuchumana sendlela ukugcina izinto "Maynkraft"
Qala emphemeni phezu Shaman: izimfihlo umdlalo hearthstone
Kuthiwani uma ukhule izinwele emva izinwele ukususwa?
Izinhlobo, amafomu nezibonelo tento
Ukubikezela lwezezimali nokuhlela - Izilawuli ahlobene
Izimpawu ze-Down Syndrome ekukhulelweni. Izindlela ngoba ukuthola Down Syndrome ekukhulelweni
Kuyini elihlangana kagesi? Isicelo kanye nokulungiswa
Ukuqeqeshwa York. Amathimba inja uhlu, futhi kanjani ukufundisa
Epholisayo. Amandla we capacitor icala
Izinhlobo ezimbili zokwenza ama-roses avela kumaswidi